Saldhigyo ay leeyihiin Al-shabaab oo Kenya sheegtey in Diyaaradaheedu Duqeeyeen. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Saldhigyo ay leeyihiin Al-shabaab oo Kenya sheegtey in Diyaaradaheedu Duqeeyeen.
Diyaaradaha dagaalka dowladda Kenya, ayaa duqeeyay saldhigyo Al Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose ee Koofurta Soomaaliya.
Duqeynta ayaa ka dhacday deegaanka Kaanjaroon oo qiyaastii 60km koonfur ka xiga Magaalladda Kismaayo.
Sidoo kale waxaa jira warar kale oo sheegaya in diyaaradaha ay duqeeyeen deegaanka Beer-naas, oo 60km u jira Magaalladda Kismaayo.
Deegaannada ayaa waxaa maamulla Xarakadda Al Shabaab, sida dadka deegaanka ay sheegeen.
Lama shaacin khasaaraha ka dhashay duqeynta, mana jiraan war ka soo baxay Xarakadda Al Shabaab ee Soomaaliya.
Al shabaab ayaa ku xooggan qeybo ka mid ah Jubbooyinka, waxaana dhawaan dagaal xooggan oo u dhexeeya Al Shabaab iyo ciidanka Kenya uu ka dhacay deegaanka Kudhaa.
Shalay oo Talaado aheeyd ayaa saraakiisha dowladda Kenya, waxaa ay sheegeen in howlgal ay ka sameeyeen deegaanka Ceel-waaq ee gobolka Gedo ku dileen 15 ka tirsan xoogagga Al-shabaab.
Afhayeen u hadlay militariga dowladda Kenya oo lagu magacaabo Col. Joseph Owuoth ayaa sheegay in ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka midowga Africa AMISOM ay dileen dagaalyahanada Al Shabaab ka tirsan.
Col. Joseph ayaa intaa ku darray in sidoo kale howlgalka lagu bur-buriyay gawaari iyo hub ay adeegsanayeen xoogagga Al-shabaab.
Horaantii bishan April, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay inuu dalku galay xaalad dagaal, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qeyb qaataan hawlgallada ka dhanka Shabaab.
Madaxweynaha oo ku labisnaaa dharka ciidanka ayaa farriin u diray dagaalyahanada Al Shabaab, isaga oo u ballan qaaday in ay heli doonaan daryeel iyo soo dhaweyn haddii ay ka tanaasulaan falalka aragixisnimada ah.
“Waxaan rabaa inaan baaq cafis ah u diro dhallinyarada Soomaaliyeed ee Al Shabaab ka tirsan. Dowladdu waxay ku soo dhaweyneeysaa gacmo furan, waxaan siineynaa waxbarasho ,waxaana u abuureynaa shaqooyin. Ma dooneyno inaan layno dhallinyaradeenna. Waxaan mar kale idinku baaqeynaa in aad kasoo tagtaan Al Shabaab sida ugu dhakhsiyaha badan. Waxaad haysatan muddo 60 cisho ah.”
Previous articleMuqdisho oo ay ka furmayaan wadahadalo u dhaxeeya Galmudug iyo Ahlusunna.
Next articleDalka Kenya Nin lagu eedeeyey in uu ka tirsanyahey Ururka Daacish oo Eheladiisu beniyeen warkaas.